Information momba ny orinasa | Solar Solve Marine
Solar Solve dia napetraka tao amin'ny 1975. Manamboatra ny marika manerantany ho an'ny fiarovan-tena avo lenta isika ho an'ny Marine Vessels, Air Tower Control Tower, Volvo Oil, Crane Cabs, VTS Towers ary fampiasana ara-barotra sy indostria hafa.
Nahazo mari-pankasitrahana lehibe ho an'ny fanondranana entana sy haingam-pandraharahana izahay - saingy ny fiderana sy ny fijoroana vavolombelona avy amin'ireo mpanjifanay no manamafy ny filazanay fa marika erantany.
Manondrana any amin'ny firenena hafa 100 izahay. Ny solosainay maivana sy ny jirosin-jiro mihodina dia napetraka ao anaty sambo Marine, alam-barotra alam-barotra, towers air traffic control, cabane cranes, VTS tower and control rooms manerana izao tontolo izao.
Solar Solve dia manolo-tena amin'ny fanatsarana tsy tapaka ny fizotran'ny fanamboarana anay ary amin'ny famatsiana vokatra vaovao sy manokana ary serivisy manerantany ho an'ny indostrian'ny jamba an-dranomasina. Manome vahaolana izahay hanomezana izay ilain'ny mpanjifanay rehetra. Miaraka amin'ny traikefa efa an-taonany 40 mahery amin'ny fanamboarana jamba kalitao ny fahatokisanao anay.
SOLASOLV® Sunscreens mangarahara no hany sunscreens eto an-tany izay Type Approved by Lloyd's, DNV, ABS ary RINA. Ny fitsapana henjana dia notontosain'ny tsirairay karazana Type Approval izay miantoka ny SOLASOLV® Ny filentehan'ny masoandro dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny lalàna.
ROLASOLV® Ny jiro jiro mitandavana dia ny hany vata volom-bala miparitaka amin'ny alàlan'ny "flute retardant" izay ankatoavina ho ampiasaina amin'ny alàlan'ny solika solika, platforms, FPSO's, jack-ups, onshore drilling offshore ary ny hafa onshore Structures.
Fanambarana momba ny iraky ny orinasanay
Mba hampandehanana orinasa iray mahasoa dia ny famolavolana, ny famokarana, ny famokarana sy fanamafisana ny kalitaon'ny Solar Solve, SOLASOLV® sy ROLASOLV®, ho an'ny tombotsoan'ny mpanjifantsika sy ireo mpiray antoka rehetra eran-tany, mba hahazoana antoka fa mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fananana ary ny fifandraisana maharitra amin'izy ireo.
Fanambarana momba ny fahitan'ny orinasanay
Hitazomana ny SOLASOLV® anti-glare roller sunscreens ary ny ROLASOLV® roller blinds ho marika marika karazana Approved of the Global Marine industri ary hanitatra ity fahombiazana ity mba hampidirana ny Air Traffic Control Towers an'ny indostrian'ny Aviation Services, VTS Towers, Rigs Oil ary mpandraharaha. taksi amin'ny karazana Cranes sy fitaovana mavesatra hafa rehetra. Tohizo ny fankalazana anao ho ivon-toerana miavaka amin'ny sehatra misy anay sy ireo indostria tompoinay.
Fahamendrehana - milaza izany izahay ary manao izany izahay
Asa fanompoana - niavaka
Fahombiazana - manao izany indray mandeha isika, manao izany haingana, ary manao izany tsara
Ny fahatanterahana - dia izay azontsika tsirairay isaky ny andro fiasana
Sarobidy - ampiasainay ireo fihetsika ireo izay tsy afaka mividy vola
Ny politikan'ny kalitaon'ny orinasanay
Ny Solar Solve Limited dia mirehareha amin'ny laza izay namboarina hatramin'ny nananganana azy, ary tsapantsika hatrany ny fiheverana hatrany izay ilaina mba hitehirizana ny tsy fivadihantsika. Mba hiantohana ny fitazonana ny kalitaon'ny serivisy sy ny fanatsarana hatrany dia hanaraka ny fepetra takian'ny BS EN ISO 9001: 2015 izahay manomboka izao.
Noho izany antony izany dia manolo-tena amin'ny politikan'ny kalitao izahay - hivoatra amin'ny famokarana jamban'ny masoandro azo averina ary ireo karazan-javamaniry hafa rehetra izay ekena hampiasaina amin'ny indostrian'ny ranomasina.
Ny orinasa dia manolo-tena amin'ny programa fanentanana momba ny kalitao izay mitaky ny fiaraha-miasa & fandraisana an-tanana ny fitantanana ambony & ho an'ny mpiasantsika rehetra.
Ireo fomba fanao voafaritra ao amin'ny Boky Torolàlana momba ny kalitao dia vokatry ny fijerinay tsara ny fepetra takiana - ary matetika ny tsirairay - ny mpanjifanay. Izy ireo dia mamaritra ny fomba fiasa miasa izay tsy maintsy ataon'ny mpiasa ao amin'ny orinasa rehetra mba hahazoana antoka fa voatazona ny Politikan'ny kalitaon'ny orinasanay. Ny tanjona sy tanjon'ny orinasa amin'ity lafiny ity dia toy izao:
1) Ny orinasa dia hitazona sy handrakitra ny rafitra fitantanana kalitao Accredited izay manome fahafaham-po ny zavatra takian'ny mpanjifa ary miantoka ny haavo azo ampiharina avo indrindra amin'ny serivisy.
2) Hanolotra vokatra amin'ny daty nanaterana nifanarahana ny orinasa.
3) Ny orinasa dia hamolavola ny vokatra / serivisiny mifanaraka amin'ny takiana amin'ny tsena.
4) Ny orinasa dia hisafidy mpamatsy izay mikendry serivisy tsy tapaka sy matihanina ara-potoana.
5) Ny fahatsarana kalitao dia tratra amin'ny alàlan'ny fananganana fahatsiarovan-tena tsara ho an'ny mpiasa rehetra. Ny orinasa, araka ny voalaza etsy ambony, dia hampianatra, hampiofana, handanjalanja ary hanombatombana ireo mpiasa ao aminy amin'ny lafiny takiana rehetra amin'ny fanaraha-maso kalitao.
Amin'ny fanatratrarana ireo tanjona ireo, dia hikendry ny hihoatra ny andrasan'ny mpanjifa amin'ny lafiny kalitao sy serivisy izahay.
Mba hahatakarana ny fepetra takiana momba ny kalitao, dia hisy kopian'ny politika ho an'ny mpiasa rehetra.
Azafady mba jereo koa: